I-Toronto iya eLas Vegas, eOrlando, eTampa naseCancun kwiAir Canada Rouge ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Toronto iya eLas Vegas, eOrlando, eTampa naseCancun kwiAir Canada Rouge ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Inqwelomoya yenqwelomoya ye-Canada Canada, iphinde yaqala inkonzo ngoku ngeenqwelomoya ezisebenza phakathi kweToronto neLas Vegas, iOrlando kunye neRegina, kunye nezinye iindawo ezaziswa ngoSeptemba, kubandakanya iCancun neTampa.
I-Air Canada Rouge ibuyela esibhakabhakeni ngokukhetha ngakumbi abahambi bokuzonwabisa.
Ukuqala kwakhona kweempawu zokunxiba iyunifomu kunye nokuzonwabisa okusasazwayo okuphuculweyo.
Ukuhlaziywa kwangaphakathi kwekhabini ukuze kufumaneke kwiinqwelo-moya ezikhethiweyo eziqala ukuwa.
I-Air Canada Rouge, inqwelomoya yenqwelomoya yokuphola, iqale inkonzo namhlanje ngeenqwelomoya ezisebenza phakathi kweToronto neLas Vegas, iOrlando kunye neRegina, kunye nezinye iindawo ezaziswa ngoSeptemba, kubandakanya iCancun neTampa.
Abahambi ngenqwelomoya eRouge baya kudlala iyunifomu entsha
“I-Air Canada Rouge ihleli iyinxalenye yesicwangciso-qhinga seAir Canada. Njengokuba siphuma kubhubhane, silindele ukwanda kwesidingo sokuhamba ngeholide kunye nakubathengi abahamba ngenqwelomoya ukonwabela ukundwendwela ixesha elingaphaya nosapho kunye nabahlobo. Inqwelomoya yenqwelomoya iAir Canada ikulungele ukukhonza le marike inendawo ezininzi zokuzonwabisa kunye namava okumema abantu ukuba bahambe ukuze iiholide ziqale ngokukhawuleza xa abathengi bengena kwinqwelomoya eAir Canada Rouge, utshilo uJon Turner, uSekela Mongameli weeNkonzo zeNdiza kunye noMongameli. , Ukusebenza kweRouge, eAir Canada.
I-Air Canada Rouge ikwabonelele ukukroba kwendawo yangaphakathi yeekhabini eya kufumaneka nge-XNUMX Airbus Iinqwelomoya ze-A321 zeenqwelomoya ezingama-39 zeRouge Fleet, ngenkonzo yokuqala yokungena emva kokuwa.
Ezi nqwelo moya zisithoba zibonisa uyilo lwangaphakathi lwangoku olunempawu zokudlala zeRouge kwaye ziya kulungiswa ngezihlalo zesikhumba, kunye nesihlalo se-intshi ezingama-30 kwikhabhathi yezoqoqosho. Inqwelomoya ye-A321 Rouge ikwabonelela ngeendlela eziphuculweyo zamandla akho, kubandakanywa amazibuko e-USB-C, kunye nesiphatho esifanelekileyo sombane esihlangeneyo esihlalweni.
Ngokuphinda kuqaliswe inkonzo yeAir Canada Rouge, eyayimisiwe ukususela ngentwasahlobo yowama-2021, abathengi banokonwabela imveliso kunye nokuqinisela okuyiliweyo kuyo yonke inqwelo moya yeRouge.